QM oo shaacisay tirada kharashka ay ku bixineyso la dagaalanka Ayaxa Soomaaliya | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta QM oo shaacisay tirada kharashka ay ku bixineyso la dagaalanka Ayaxa Soomaaliya
QM oo shaacisay tirada kharashka ay ku bixineyso la dagaalanka Ayaxa Soomaaliya
Qarramada Midoobey ayaa sheegtay in lacag dhan 1.5 Million dollar ay ku bixineyso la dagaalanka Ayaxa faraha ba’an ku haya wadamo ka mid ah Geeska Africa oo Soomaaliyana ay ku jirto.
Qarramada Midoobey ayaa dhaqaalahan soo marin doontaa hay’adda Cuntada iyo Beeraha ee FAO, waxaana inta badan loo isticmaali doonaa hawlgallada xakamaynta Ayaxa, iyadoo lagala dagaallamayo hawada iyo dhulka.
Sarkaalka lagu magacaabo Farhan Haq oo ah ku-xiggeenka guud ee Qarramada Midoobey ayaa sheegay in tan iyo Disembar 2020 ay duufaanno ka dhaceen bariga Ethiopia iyo bartamaha Somaliya oo ay ka dhacday tii ugu xoogga badnayd ee Gati.
Bishii la soo dhaafay ayay hay’adda Cuntada iyo beeraha QM u qaabbilsan ee FAO codsatay dhaqaale dheeri ah si sare loogu qaado la dagaallanka Ayaxa ka dillaacay waddamada bariga Afrika oo ay u horreyso Soomaaliya.
Soomaaliya qeybo badan oo ka mid ah waxaa faro ba’an ku haya Ayxan oo raxan raxan u duulaya kuwaa oo bartilmaameedsanaya Baaraha iyo guud ahaan wixii dhir ah oo deegaanka ku yaala.
Maqaal horeDFS oo war ka soo saartay duqeyn lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsanaa Al-Shabaab
Maqaal XigaAxmed Madoobe Oo Ku Baaqay In Xal Laga Gaaro Khilaafka Doorashada 2021